Ny krizy maraokana voalohany | Fitsangatsanganana tanteraka
Ny krizy maraokana voalohany
Daniel | | Maraoka
Talohan'ny Ady lehibe voalohany dia taitra izao tontolo izao tamin'ny mety hisian'ny fifandonana eo amin'ireo firenena matanjaka eropeana tamin'izany fotoana izany. Ny ivon'ilay olana dia tao an-tanànan'i Tangier, izay nantsoin'ny tantara maoderina Krizy maraokana voalohany, teo anelanelan'ny 1905 sy 1906.
Mba hahatakarana ny zava-nitranga rehetra teo anelanelan'ny volana martsa 1905 sy Mey 1906 nanodidina ny tanànan'i Tangier, dia tsy maintsy fantatry ny olona ny zava-misy ara-jeopolitika tamin'izany fotoana izany. Any Eropa, ary amin'ny fanitarana amin'ny sisa amin'izao tontolo izao, dia nisy rivo-piainana iraisam-pirenena henjana teo amin'ireo fahefana lehibe. Nantsoin'izy ireo hoe ny Fandriampahalemana mitam-piadiana. Ny toerana fiompiana tonga lafatra ho an'ny ady lehibe izay hitranga folo taona taty aoriana.
Tamin'izany taona izany UK sy France dia nanao fanekena fantatra tamin'ny anarana hoe Veloma finaritra. Ny politikan'ny raharaham-bahiny amin'ireo firenena ireo dia nifototra tamin'ny fiezahana nitokana Alemania ny tontolon'ny hery mitaona iraisampirenena, indrindra any Azia sy Afrika.
Tao anatin'ity lalao ity, tamin'ny volana Janoary 1905 dia nahavita nametraka ny fitaomany tamin'i sultan any Maroc. Ity dia manahirana manokana ny Alemanina, izay nijery tamim-piahiahy ny fomba nifehezan'ny mpifanandrina azy ireo ny fomba fiasa roa mankany amin'ny Mediteraneana. Ka ny Chancellor Von Bülow Nanapa-kevitra ny hiditra an-tsehatra izy ary namporisika ny Sultan hanohitra ny faneren'ny frantsay ary hanome antoka azy ny fanohanan'ny Reich Faharoa.
1 Ny Kaiser dia mitsidika an'i Tangier
2 Ny Konferansa Algeciras
3 Faran'ny krizy maraokana voalohany
Ny Kaiser dia mitsidika an'i Tangier
Misy daty hametrahana ny fiandohan'ny krizy maraokana voalohany: 31 martsa 1905, rahoviana Nitsidika an'i Tangier tampoka i Kaiser Wilhelm II. Ny Alemanina dia nampidina ny sambony matanjaka tao amin'ny seranan-tsambo, ary niseho hery. Nanambara mafy ny gazety frantsay fa fihetsika fihantsiana io.
Manoloana ny firongatry ny tsy fahaizan'i Frantsa sy ireo mpiara-dia aminy dia nanolo-kevitra ny hanao fihaonambe iraisam-pirenena ny Alemanina mba hitady fifanarahana amin'i Maraoka ary, amin'ny faritra hafa, any avaratra. Nolavin'ny anglisy io hevitra io, fa i France kosa tamin'ny alàlan'ny minisitry ny raharaham-bahiny Téophile Delcassé, nanaiky hiresaka momba izany. Na izany aza, nesorina ny fifampiraharahana raha toa ka nizotra tsara tamin'ny fahaleovan-tena Maraokana i Alemanina.
Ny datin'ny kaonferansa dia napetraka tamin'ny 28 Mey 1905, saingy tsy nisy na iray aza tamin'ireo hery nantsoina namaly izany. Ankoatr'izay, ny anglisy sy ny amerikana dia nanapa-kevitra ny handefa ny andian-tafika misy azy avy any Tangier. Nitombo ny fihenjanana.
Ny minisitry ny raharaham-bahiny frantsay vaovao, Maurice rouvier, avy eo nampiakatra ny fahafaha-mifampiraharaha amin'ny Alemanina mba hisorohana ady mihoatra ny mety. Ny firenena roa tonta dia nanamafy ny fisian'izy ireo miaramila teo amin'ny sisintaniny tsirairay avy, ary ny mety hisian'ny fifandonana mitam-piadiana amin'ny ambaratonga dia mihoatra ny azo antoka.
Ny Konferansa Algeciras
Ny krizy maraokana voalohany dia mbola tsy voavaha noho ny ny toerana nifanandrinana teo amin'i Alemana sy ireo taona maro taty aoriana dia ho fahavalony ho avy. Indrindra ny anglisy, izay vonona hampiasa hery ara-tafika mba hampijanonana ny fitarihan'ny Reich. Ny frantsay, izay natahotra ny ho resy tamin'ny fifanandrinana ara-tafika tamin'ny Alemanina teny amin'ny tany eropeana, dia tsy dia tia ady loatra.
Ary farany, ary taorian'ny ezaka diplaomatika marobe, ny Konferansa Algeciras. Ity tanàna ity dia voafidy satria akaikin'ny faritra misy ny fifanolanana sy amin'ny faritany tsy miandany na dia izany aza España tamin'io fotoana io dia napetraka kely teo amin'ny lafiny Franco-anglisy.
Fitsinjarana ny faritra misy ny fitaomana any Maroc araka ny fivorian'ny Algeciras Conference of 1906
Firenena XNUMX no nandray anjara tamin'ny kaonferansa: ny Fanjakana Alemanina, ny Fanjakana Austro-Hongria, ny Fanjakana Mitambatra, Frantsa, ny Fanjakana Rosiana, ny Fanjakan'i Espana, ny Etazonia, ny Fanjakan'i Italia, ny Sultanate of Morocco, the Netherlands, the Kingdom of Sweden, Portugal, Belgique ary ny Fanjakana Ottoman. Raha fintinina, ireo firenena matanjaka lehibe miampy firenena sasany voarohirohy tamin'ny resaka maraokana.
Faran'ny krizy maraokana voalohany
Taorian'ny fifampiraharahana telo volana, ny 17 aprily ny Asan'ny Algeciras. Tamin'ny alàlan'ity fifanarahana ity dia nahavita nitazona ny fitaomana nananany tany Maroc i Frantsa, na dia nampanantena aza izy fa hanao andiam-panavaozana ao amin'ity faritany ity. Ny fehin-kevitra lehibe tamin'ny kaonferansa dia ireto manaraka ireto:
Famoronana any Maraoka an'ny Protectorate frantsay sy ny Protectorate Espaniola kely kokoa (mizara roa faritra, ny iray any atsimon'ny firenena ary ny iray any avaratra), avy eo nanomboka tamin'ny Fifanarahana Fez amin'ny 1912.
Fananganana sata manokana ho an'i Tangier amin'ny maha-tanàna iraisam-pirenena azy.
Nolavin'i Alemana ny fitakiana faritany any Maroc.
Raha ny marina dia nifarana tamin'ny alàlan'ny fihemorana avy any Alemana ny kaonferansa Algeciras izay mazava fa ambany noho ny an'ny anglisy ny herin-tafika an-dranomasina. Na izany aza, nakatona tamin'ny lainga ny krizy maraokana voalohany ary ny tsy fahafaham-pon'ny Alemanina dia niteraka toe-javatra fitsikerana vaovao tamin'ny 1911. Indraindray dia tsy Tangier ilay tranga, fa Agadir, toe-javatra vaovao misy ny fihenjanana iraisam-pirenena fantatra amin'ny anarana hoe Krisisoa Marokana Faharoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Ny krizy maraokana voalohany
Ny rameva, fitaovam-pitaterana tena mahomby
Ny fahasamihafana ara-kolontsaina any Canada